Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Zubair Torwali, mpikatroka ho an’ny fiteny Torwali · Global Voices teny Malagasy
Zubair no hampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 6 -12 May 2020
Voadika ny 17 Mey 2020 15:33 GMT
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Zubair Torwali (@zubairtorwali) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Mpikaroka aho, mpanoratra, mpikatroka sady mpisolo vava an'ireo fiteny vitsy an'isa ao Pakistàna, monina any Swat Valley ao Pakistàna. Mitarika fikambanana iray aho eto, ny IBT (idara baraye taleem-o-taraqi na ivontoerana ho an'ny fanabeazana sy ny fampandrosoana, izay miasa ho an'ny fandrisihana ireo vondrompiarahamonina an-tendrombohitra any avaratr'i Pakistàna, amin'ny alàlan'ny fiteny sy ny raikitra ara-kolontsaina, ny fikajiana, ny fanorenana fahaiza-manoratra sy mamaky amin'ireny fiteny ireny; famokarana sy fizaràna fahalalàna eny anivon'ireny vondrompiarahamonina ireny.
Tamin'ny 2007 no nananganako ny fikambanana IBT, niarahana tamin'ireo tanora hafa avy amin'ny vondrompiarahamonina Torwali. Nanoratra aho boky roa amin'ny fiteny anglisy, lahatsoratra voka-pikarohana marobe, ary lahatsoratra an-jatony ho anà gazety momba ny fikajiana ny fiteny, ny pôlitikan'ny fiteny sy ny fanabeazana, ny olan'ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana; ary momba ny ady sy ny fandriampahalemana.
Efa hatramin'ny 2007 ny IBT, fikambananay no nametraka ireo tetikasa momba ny fiteny Torwali. Izy ihany koa no namorona ireo sekoly 4 MTB-MLE amin'ny fiteny Torwali andraisan'ireo ankizy dieny mbola any am-piandohan'ny fanabeazana azy ao anatiny sy amin'ny alàlan'ny fitenin-dry zareo. Fanampin'izay, nanonta boky marobe ihany koa ny IBT, amin'ny fiteny sy momba ny fiteny Torwali, izay ahitàna rakibolana, angano, tononkalo malaza sy firesaka andavanandro. Namokatra ihany koa ny IBT an'ireo rakipeo sy rakitsarinà mozika Torwali niaraka tamin'ny fikarakaràna hetsika ara-kolontsaina. Tsy ela akory izay, nanentana ihany koa hetsika roa nitantaràna angano ny IBT. Namokatra ihany koa izahay fitendry Google iray ho an'ny fiteny Torwali izay ampiasaina amin'ireo finday Android.